Inj. Cabdicasiis Maxamed Cabdullahi (Mataan)
W.T.: Inj. Cabdicasiis Maxamed Cabdullahi (Mataan)
Maaansada Dadkeygoow waxaa curiyay inj. C/casiis Maxamed Cabdullaahi ( Mataan), oo ku nool magaalada Ghent ee waddanka Belgium. Maansadu waxay taxana maansooyinka Doodwanaag ku soo biirtay 25-12-2004, waana Maansadii 29 aad ee Silsilad-suugaaneedda Doodwanaag.
Maansada DADKEYGOOW waxay xanbaarsan tahay arrin aad muhiim ugu ah horumarka ummaddaha, taas oo ah inay waxa ay aaminsan yihiin ee diin ama dabeecad ah ka runsheegaan. Inay aqoonta ahaato dhaxalka soo jireenka ah ee la kale qaado oo jiilkasta kan xigga uu u gudbiyo. Waxaa Maansada ka muuqanaya seddex arrimood oo muhiim u ah kobcinta wacyiga dadka soomaaliyeed. Waxay maansadu tilmaantay:
Inay Diinta Islaamka oo ay dadka Soomaaliyeed ku abtirsadaan ay ahayd midda dadka carabta ka saartay dhibaatoyin, xilli ay ahaayeen raashin fudud oo cidii doonto ay si sahlan dhuunto u mariso, iyada loo adeegsanayo kuwa iyagga ka mid ah. Cudurkaa (dhuuni-qaate) ayaa ah kan ugu weyn ee dalkii iyo dadkeena ka bogsoon la' yahiin.
In dadku ogaado inay jirto xisaabtan dhab oo hadii uu aamino ay ku adkaani inuu ku xad gudbo cid kale, waayo maalinta qiyaamaha qof wax qarin karaa ma jiro oo jirkaaga ayaa markhaati ah. Cid waliba waxaa lagu abaalayaa wanaag iyo xumaanba intuu doono ha la ekaadee, meeshaad dageysana iyaga ayaa xaddidaya.
Qaybta ugu danbaysa ayaa ah in ubadka lagu abaabiyo aqoonta iyo jeceylka dhulkooda, taasoo keeneysa inuu Ilmuhu dareemo inuu dhib iyo dheefba la wadaago kuwa la filka ah oo aanan cidi si gooni ah u lahayn dheefta, kuwana dhibaatada. Caddaalad darro ku dhacdaa qaybinta hantida dhulku leeyahay waxay dhalinaysaa kale durugsanaan iyo is naceyb joogta ah.
Dibnahii gu�yaal badan
Gabaygaba ka daahnaa
Dabarkaba ka jarayee
Kheyrka loogu dawgaley
Kuwii soo diyaarshee
Doodwanaag inoo furey
Iyo kuwa dalbanayee
Kolba bayt degsiiyee
Salaan baa u dirayaa
Diirranaan ku idishahay
Daacadnimana dheer tahay
Ma og tahay dadkeygoow
Inay diintu nabad tahay
Dugsi kheyrka keeniyo
Doog iyo barwaaqiyo
Meel damiirku nagi yahay
Dadka uu walaal yahay
Aan laysu dudin oo
Dilka iyo colaaddiyo
Qoloqolo u diririyo
Daris laysu laayana
Degmadu ay ka faantaa
Nabad lagu dekeeyaa
Cirka roob ka da�ay iyo
Dhulkoo soo dillaaciyo
Durdur aan go�ayn iyo
Daahiiba laga furo.
Ma og tahay dadkeygow
In Qabiil Dir-Jaan yahay
Duumada ka daran yahay
Marna inuu dilaay yahay
Cudur aan dawoobayn
Qofka uu duraantee
Mudda badan duljiifee
Daris wacan la yeeshaa
Inuu duluf ka dhigayoo
Dhiig durduura mooyee
Wax damqaaya ay jirin.
Maansadan da� layda ah
Dareenkeyga gaar ka ah
Dadkaygaan u farayaa.
Da� yar waxaan iraahdaa
Dhagahood ku diirshaa
Dugsiyadii ka yaacee
Daroogada la barayee
Qori deegta saartee
Dilku uu la fudud yahay
Soo dabaaliddood iyo
Inay dawrka maanta ah
Dusha ay ku qaataan
Caqligana la doodaan
Aqoonta ay ka duulaan
Dagaal xooggan kiciyaan
Dunidda ay mushaaxaan
Docna ooga baxahayn
Illayn duul horaa yiri
Mid waliba debeecada
Tii ay la daristeey
Damiir laawayaasha ah
Guri uu dad lee yahay
Duggaalkiis u wacan yahay
Dabin baan u dhigayaa
Dayr oodan baan galin
Barkood waa dibqabateyn
Dugsiyaan u furayaa
Darsi baan u dhigayaa
Aqoon baan la daris dhigi
Danta guud ayaan bari
Kuwa diidmo keenee
Dareenkuba ka maqan yahay
Waan kale dilaayaa
Midba maalinbaa duban
Aqoon duug ah haystee
Dawladnimo waxay tahay
Dawgeeda garan iyo
Aqoon yahanka diiree
Dabku uu dhibaayiyo
Xilli hore ka diday ee
Dal shisheeya tubanee
Aan helin daryeelkiyo
Waxay daw u mudanyiin
waxaan kula dardaarmaa
mar Inay dalkeennii
Dib u soo jalleecaan.
Dibad inuu wanaag jirin
Dacar iyo dhunkaal tahay
Dadku inay dhammaantood
Daciif kugu tilmaan
Inaad tahay nin duur-joog
Daris ay wadaagaan
Ficilkana ka duwaneeyn
Kuwa soo didaayee
Ayaan deelka maansada
Diiwaankan qoran ee
Daris iyo xigaaladu
Ay ku diirsadeenoo
Aan ugu diraayaa.
Hooyada la dilayee
Daldalaad la badayee
Waa hore duqeediyo
Xabbad lagu dalooshee
Garanayn wixii dilay
Ee dakanadaa galay
Ayaan dood la yeeshaa
Oo dareemayaa ebed
Xanuunka ay la diiddee
Daaduun ka dhigayoo
Mar waxaan la doonaa
Dajin leyd qofkaa maqan
Marna waxaan ku daalaa
Wakhti badan duljoogaa
Dulmigaa kuwii dhigay
Sidee loo dacwiyayaa
Daliil loogu helayaa
Dabadeedna loo marin
Sida dawga uu yahay?
Ma ogtahay dadkeygow
Inuu Daa'im nagu yiri
Dib baa loo xisaabtami
Deerada kollay tahay
Tii ay daciifnimo
Hardi ay ku daabtaa
Waa looga soo dari
Markii uu danbeetada
Miisaan la wada dayi
Dulmi uu ka dheer yahay
Lagu kale dan boganaa
Dadka waa la kala mari
Kooxba meel ayey dagi
Darajana la kale badan.
Meeli waa dab Naaroo
Anbiyadii la soo diray
Gabigood ka digayoo
Dadka iyo dhagxaantaa
Dogob looga dhigayaa
Waa dabaqye hoosoo
Naxariisba laga daday
Waxaa loo diyaarshoo
Dulmi kii sameeyee
Rusushii isdaba tiil
Wixii ay ku dooddee
Dadka ay u keentiyo
Markey oon dareemaan
Waxaa lagu duwaayaa
Weel loo daraayaa
Danbarsada la wada dhihi
Dab cadaab la galiyoo
Markuu daakhilkaa galo
Calooshaba dib laga dhigi !
Docna waa Barwaaqoo
Doox iyo xareediyo
Sariir lagu dangiigiyo
Caano soo durdurayiyo
Fardowsaa la degayaa
Nafta wixii ay doontaa
Durbadii la falayaa
Waa dayaafad kheyroo
Waxaa loogu darayaa
Naxariis ku deeqdiyo
Guri dabaqyo weynoo
Dahab weelku yahayoo
Dadku ay is jacelyiin!.
Dunidaan ku noolnahay
Deggan eed arkeysaan
Waxa ay ka duulaan
Da� yartiyo ma-garatada
Ducufada u sheegaan
Midnimo inay duggaal tahay
Inay Doobir buuxiyo
Dix barwaaqo nagi tahay
Meel doog ka baxayiyo
Deegaan wanaag yaal
Oo loo dalxiis taggo
Ways wada dileynaa
Waan Kala didaynaa
Dab uun baa dhexdeenna ah!
Dir midaan kawa nimid
Diin kaliya baan nahay
Diirna waan wadaagnaa
Duul yahow maxaa dhacay?
Qalbigeen maxaa daday ?
Duxdii yaa ka muudsaday?
Yaa daah ku soo rugay?
Dadka loo abuuraa
Waa hore daboolmoo
Dhagax baan la darisnoo
Dareen aan ka simannahay
Maxaa laysu dilayaa?
Oo laysu dooxaa?
Dirirta iyo cooladuhu
Muddo badan la daristee
Day-dayga iyo mooryaan
Iyo kuwa ka daran oo
Darajada ku raadsado
Dadkii ay idleeyeen
Aan la diidi Karin oo
Waxay iyaga doonaan
Dood la'aan la fuliyoo
Dallacaadna lagu helo
Horta yaa dabkaa shadiday?
Xaggee nalaga daakhilay?
Sideen kaga dawownaa?
Dadku waxay yiraahdaan
Cadawbaa daf soo yiri
Waa hore dab huriyoo
Damiirlaawana u helay
Dibjiroon wax garanayn
Dabadeed wuxuu rabo
Ayuu dabacsanaan fulin
Ka daayana ma oran karo
Ducufana ma waayn karo.
Anna waxaan ku doodaa
Damiinnimo uun weeyaan
Waa horaa dadkeen yiri
Geed baa dagaal galay
Aan ka daynin hadimoo
Dal shisheeye loo tagay
Dacwa kululna lagu furay
Waxaa dalab ku yimid oo
Dagaalkii ka qayb galay
Gudin daab le adag oo
Meeshii la doonaba
Iyadoon dib eegeyn
Laba dalab u kale dhigi
Markii uu la diidee
Ayuu yiri dadyahow jaan
Daabkaa I ciiloo
Ii horseed daalkane
Waligey ma diideen!
Waxaan uga dan leeyahay
Dulucdeydu ay tahay
Hadii uu dadkeygow
Cadowgeen damiin helin
Oon dantiisa loo fullin
Ducfiga aan ku noolniyo
Duliggaan ma mudaneen!!
Dadkaygaan u farayaa
Duul waxaa wax tari kara
Damiirkood naf galin kara
Dulligana ka bixin kara
Danta guudna bari kara
Aqoon lagu dadaloo
Gu�yaal badan la duugoo
Dugsi loo fariistoo
Ubad lagu dardaarmee
Hadii taa la diidane
Dib baa loo shallaayaa
Oo sida dalkeennaa
Doorkii la laaynaa
Iyadoo la dayiheyn
Docda layska soo galay.
Dabka waxa shidaayee
Xaqiiqdii dilaaga ah
Waa diin la�aantiyo
Aqoontii la dabamaray
Ubadkaan la daayacay
Aan la barin dantoodiyo
Dagta uu wanaag jiro
Waxaa taa daliil u ah
Adinkaba bal daawada
Dadkii carab ahaayee
Dibjirada ku caan baxay
Daris laysu laayiyo
Kala durugsnaan iyo
Dagaal joogta oon bi�in
Siday Diin ka yeeshee
U hoggaansheen dunidaan
Muddo gaaban dabadeed
Markii ay duntoodiyo
Aqoonna ay darduurteen
Mar kalana bal ila daya
Daruuraha cirkee sare
Qamarkaa la dariska ah
Ee dagaal sokeeyaad
Qarnigii na dabamaray
Dam ka siiyey qaarkood
Siday uga dabaasheen
Markii ay dadkoodiyo
Da� yartood ku beereen
Aqoon daawadeed iyo
Wuxuu dabarjar leeyahay
Daawadu halkay taal
Waa inaad damiin noqon
Dadku ay nuglaystaan
Waa inay dantaadiyo
Aysku daba nudnaadaan
Isku dawlis haytaan
Waa inaadan Diintaa
Marna aad ka diga rogan
Aqoontana ka duushood
Dadka aad ku beertood
Dabaqooyin laga dhigo
Jiilba kiisa daba yaal
Uu u sii daliilshaa.
Waa inaad dadkaadiyo
Ubadkaba ku deyrtaa
Dalka inay ku faanaan
Dulligana ka dhawraan
Damiirkooda waxii dhibi
Waa inaad ka daysaa
Waa inay dareemaan
Dadku inuu u siman yahay
Dirirtu ay dhammaataa
Dugsiyadii dib loo furo
Way daal bogteenoo
Dihanka iyo barwaaqada
Aan wali la daalicin
Daljirkii aqoon adag
U daliishan laayoo
Soo dooxi laa keen